Landa i-Cleaning Fun - Baby Panda apk yakamuva kakhulu yi-BabyBus yamadivayisi we-android | ApkDi.com
Yenza usuku fun sobuso ukunakekelwa futhi wasendlini nge Miumiu ku-3D
The description of Cleaning Fun - Baby Panda
Sesha "BabyBus" for more panda imidlalo mahhala ukuze uzame!
I-Brrring! Isikhathi sokuhlanza! Masinike uMiamiu isandla nemisebenzi yakhe. Uzofunda amacebo amaningi ewusizo emhlabeni we-3D we-Miumiu!
- Usuku lokuhlanza ekhaya
- Izingubo ezifakwe kahle
- Ukupheka ukunakekelwa ubuhle
Funda ukuhlunga izingubo uphinde uwafake esikhwameni esihle. Hlangana no-Miumiu omusha ngesenzo ngemisebenzi eminingi ethokozisayo. Bona ukuthi ungenzani ukusiza ukwenza usuku lujabulise futhi ludlale!
E-BabyBus, sizinikezela ekudaleni izingane ukudala, ukucabanga kanye nesifiso, nokuklama imikhiqizo yethu ngokusebenzisa umbono wabantwana ukubasiza ukuba bahlole umhlaba bebodwa.
Manje BabyBus inikeza imikhiqizo ehlukene, amavidiyo kanye nokunye okuqukethwe kwezemfundo abalandeli abangaphezu kwezigidi ezingu-250 kusukela eminyakeni engu-0-8 emhlabeni jikelele! Siphumelele imidlalo engaphezu kuka-150 yemfundo yezingane, izingoma zezingane ezingu-700, nezithombe zezingqikithi ezihlukahlukene ezithinta ubuciko, impilo kanye nesayensi.
Vakashela kithi: http://www.babybus.com
isigaba: Free Educational Game
usuku lokushicilela: July 24, 2020
inguqulo yakamuva: 8.43.00.10
izimfuneko: Android 4.2 and up